अजय या जिम्बा- को होलान् यसचोटि दार्जिलिङबाट भाजपा उम्मेद्वार? - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारअजय या जिम्बा- को होलान् यसचोटि दार्जिलिङबाट भाजपा उम्मेद्वार?
February 28, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार 0
त्यसो भए दार्जिलिङको भाजपा टिकट कसको? जिम्बाको कि अजयको? अजयको जनताबीच चर्चालाई मध्यनजर राखेर के दार्जिलिङको टिकट अजयलाई दिएर जिम्बालाई अन्य ठाउँबाट उठाइने हो?दार्जिलिङबाटै प्रबल सम्भावना छ भनेर किटान गर्ने जिम्बा के यसो गर्दा खुशी होलान् त? प्रश्न टड्कारो देखिन्छ।
भाजपाबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएर आउँदो विधासभा चुनावमा तृणमूलल काङ्ग्रेसलाई सघाउने बिमल गुरूङको घोषणाले पहाडको राजनैतिक गतिविधिमा व्यापक चहलपहल ल्याएको छ।
बिमल गुरूङको अनुपस्थितिमा भाजपा लगायत यसका गठबन्धन दल चुनावमा जाँदा विमलको निर्णयले कति क्षति अथवा फाइदा दिने हो त्यो चुनावको परिणामले देखाउनेछ।
तर फिलहाल पहाडमा भाजपाको मुख्य गठबन्धन दल गोरामुमोभित्रै चुनावअगाडि फुट आउने सङ्केत देखिँदैछ। स्पष्ट छ, यो फुट दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रको भाजपा प्रार्थीको टिकटको लागि हो।
गोरामुमोमा अजय एडवर्ड यस्तो नाम हो, जसले आफ्नो सामाजिक कार्यहरूको कारण व्यापक प्रशंसा बटुलिरहेका छन्। उनी आफ्नो गोजीको पैसा खर्च गरेर गाउँ-गाउँमा बाटो बनाउने काम गरिरहेका छन्। विपन्न परिवारको लागि घर निर्माण गरिरहेका छन्। गरिब विद्यार्थी नानीहरूको लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइरहेका छन्। खेलकुदको लागि ठाउँ-ठाउँमा मैदान निर्माण गरिरहेका छन्। खेलकुदमा चासो राख्ने नानीहरूको लागि मुफ्तमा प्रशिक्षण उपलब्ध गराइरहेका छन्। गाउँ-गाउँ गएर रासिन बाँडिरहेका छन्।
अजय एडवर्डको सामाजिक कार्यहरूको फेहरिश्त लामो छ।
आफू गोरामुमोसँग सम्बन्धित रहेको कारण प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा जमिनी स्तरमा दलका समर्थक निर्माण गर्न अथवा जनसमर्थन सङ्ग्रह गर्नमा फाइदा पुऱ्याइरहेका छन्। एडवर्डले गरेको हरेक कामलाई व्यापक प्रचार गर्न गोरामुमोले कुनै कसर बाँकी राख्दैन।
‘गोजीको पैसाले कहिलेसम्म काम गर्ने?अब अझ धेर काम गर्नको लागि यसचोटि जनताले गोरामुमोलाई पहाडको सत्ता दिनपर्छ’,मात्र एक महिना अगाडि दार्जिलिङमा गोरामुमोले आयोजना गरेको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा अजय एडवर्डले आफ्नो खुल्ला कुरा राखे।
अजयको यस वयानले उनलाई यसचोटिको विधानसभा चुनावमा दार्जिलिङबाट भाजपा प्रार्थीको रूपमा खडा गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत गरिरहेको यता पहाडका राजनैतिक जानकारहरू जिकिर गरिरहेका छन्।
जनताको एउटा व्यापक समूह यस्तो छ जसले यसचोटि दार्जिलिङ विधानसभा सिटको निम्ति अजय एडवर्डलाई भाजपाले टिकट दिन्छ भनेर आशा गरिराखेका छन्। उनको निरन्तर खटाई अनि जमिनी जनतासँगको उनको पहुँच हेर्दा उनलाई टिकट दिइनु फाइदै पनि देखिन्छ। अजयको कामले यसचोटिको चुनावमा असर पार्न सक्ने कुरालाई नकार्न पनि सकिन्न।
अर्कोतिर भाजपा विधायक निरज जिम्बा छन्, जसको जनतामा छवि अजयको जति राम्रो छैन। आफ्नो वेलगाम बोलीको कारण जिम्बालाई स्वयं दलभित्रकैजनताले पनि रुचाउन छोडिसकेको विशेषज्ञहरूको अडान छ।
आफ्नो विधायकको कार्यकालमा जनताको लागि केही काम पनि नगरेको स्वयं जिम्बा स्वीकार्छन्। उनको दुइ सालको एमएलए फण्ड समयमा पास नहुनुलाई उनी कारण मान्छन्।
‘जनताको लागि केही नगरी पनि मैले धेरै गरेको छु’,उनको यो बयानको आशय के हो, फिलहाल बुझ्न गाह्रो छ।
उनले डोको बोकेर फोटो खिचाए। तर फाइदा दिनको साटो व्यापक ट्रोलिङ भयो। भर्खरै जिम्बाले हानेको जुम्बा डान्स भने जनताले रिपिट मोडमा हेरिरहेका छन्। चुनावको एकदम अगाडि नेताको हरेक क्रियाकलापलाई चुनावी नजरले हेरिन्छ। यसरी हेर्दा, के जिम्बाको जुम्बाले चुनावमा असर गर्ला? हेर्न लायक कुरा छ।
केही दिन अगाडि मात्र भारत अनि चिनबीच डोकलाम विवादको कारण राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवालको परामर्शमा पहाडमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चलिरहेको बेला राज्य सरकारलाई पत्र लेख्न बाध्य बनेको कुरा सार्वजनिक गरेर जिम्बाले एउटा नयाँ विवाद खडा गरेका छन्।
तत्कालीन अवस्थामा आन्दोलनकारी जिएमसीसी अथवा विमल गुरुङलाई फोन नगरेर मन घिसिङलाई डोवालले केको आधारमा फोन गरेका हुन्, यही कुरा संशयमा छँदैछ। यदि जिम्बाको कुरा साँचो नै हो भने पनि यसले आन्दोलन बिथोल्ने र जातिलाई गद्दारी गर्ने मन घिसिङ नै हुन् भन्ने प्रमाण गर्छ।
मन घिसिङलाई यदि फोन आएकै हो भने मन घिसिङले त्यो कुरा जिएमसीसीमा राख्थे र साँच्चै नै राष्ट्रीय सुरक्षा खतरामा नै थियो भने जिएमसीसीले देशविरुद्ध कुनै निर्णय गर्न सक्दैन थियो।
तर जिम्बाले धेरै समय बितिसकेर झिकेको डोवालको फोन किस्साले गोरामुमो र मन घिसिङकै छवि धमिल्याइदियो। यस्ता अनेकौं असान्दर्भिक वयानबाजीले जिम्बाको छविलाई संदिग्ध बनाएकै छ।
जमिनी स्तरमा दलको लागि लगातार खटिरहेका अजय एडवर्ड स्वयंलाई यस कुराबारे केही थाहा नभएको स्वयं अजयले एस. के. लाइभमा बबिता मादेनसँगको अन्तर्वातामा स्वीकार गरेका छन्। के यो फुटको अर्को सङ्केत हो?
केही दिन अगाडि मात्र खबरम्यागजिनले निरज जिम्बासँग एउटा अन्तर्वाता गरेको थियो।
‘अजय एडवर्डको सामाजिक कामलाई मध्यनजर राखेर जनताले यसचोटि उनलाई दार्जिलिङको भाजपा प्रत्याशीको रूपमा हेरिरहेका छन्। के यसले तपाईंको अस्तित्व धरापमा पार्दैन?,’ खबरम्यागजिनले जिम्बासँग जिज्ञासा राखेको थियो।
‘अजयको काम सामाजिक मात्र हो। यसलाई राजनैतिक रूप दिन मिल्दैन। राजनैतिक कुर्सी पाउनको लागि होइन। वहाँको त्यो आकांक्षा छ भने वहाँले दलसँग त्यो कुरा जाहेर गर्नपर्छ। दलले त्यसको निर्णय लिनेछ। रासिन बाँड्न एउटा काम हो, भाषण गर्नु एउटा काम हो, शासन गर्नु एउटा काम हो। रासिन बाँडेर मात्र राजनीति हुँदैन,’ जिम्बाको यो उत्तरले गरेको सङ्केत के हो? त्यही बुझ्न जिम्बालाई अर्को प्रश्न गरियो।
‘यसचोटि भाजपाबाट दोस्रोचोटि प्रत्याशीको रूपमा चुनावमा खडा हुने निरज जिम्बाको सम्भावना कति छ?’
सोधिएको प्रश्नमा जिम्बाको स्पष्ट जवाब थियो, ‘प्रबल छ।’
उनले त्यसपछि एउटा शब्द थपे, ‘दार्जिलिङबाटै।’
उनको यही बयान अहिले खुल्दुलीको विषय बनेको छ।
निरज जिम्बालाई दार्जिलिङको टिकट दिँदा अजयलाई प्रत्याशीको रूपमा हेरिरहेका जनता रूष्ट बन्ने त होइनन्? ठूलो प्रश्न छ।
‘खासमा निरज जिम्बाको तुलनामा अजय एडवर्डको छवि जनतामा राम्रो छ। भाजपाको लागि दार्जिलिङको सिटमा जित अजयले नै दिलाउन सक्छन्’, नाम नलिने सर्तमा स्वयं दार्जिलिङबाट एकजना गोरामुमो समर्थकले खबरम्यागजिनसँग कुराको क्रममा भने।
चुनाव नजिक-नजिक आउँदै जाँदा जनताबाट अडकलबाजीको पर्दा बिस्तारै खुल्दै जानेछ।